Wowow, Fisarahana sy ny hatsiaka Dwade Taps Chrome
Home / Fitaovana an-dakozia / Sintomy ny fako an-dakozia / Wowow Manasaraka ny lakozia mafana sy mangatsiaka Chrome
Nasiana kromium, ny Faucet an'ny Kitchen miaraka amin'ny Side Sprayer dia manana fahatsapana ambony kokoa.
Raha bainganina tsara, ny paompy mafana sy mangatsiaka dia manana fahatsarana matevina sy marevaka.
Azo inoana fa mahazo vahana, miondrika, na miharatsy ny fahanterana.
Namboarina tamin'ny fanaraha-maso mora, ny horonam-peo kalitao dia anti-slip.
Maloto ny làm-basy amin'ny goavam-basy any an-dakozia ary tsy mora ny manangona miora sy bakteria.
Mametaka ny paozin'ny famoahana an-dakozia 23118A4C dia manome alàlan'ny swivels any amin'ny 180 degre miaraka amin'ny tombony fanampiny amin'ny sprayer-side lafiny handoa ny filan'ny fanadiovana anao rehetra dia manome ny 1 8-galon isan-tsegondra
Ny fanadiovana tsotra ny sprayer Manana hosotra lava 48-santimetatra mampiasa mekanika mety hihemotra izay mamela tsy hiasa mafy eo amin'ny faritry ny lakozia.
Ny faharetana namboarina tamin'ny baoritra kapila serasera tsara indrindra amin'ny indostrian'ny fahazoana fiainana tsy misy fotaka
Mahagaga ny farany dia manohitra ny fivarotana ny harafesina ary ny harafesina dia mitazona ny boaty anao manokana any an-dakozia toy ny fampiasana vaovao aorian'ny fampiasana
Manamboara fananganana 4-hole 3-hole miaraka amin'ny bracket deck ary elanelana fanampiny ho an'ny fanamoriana sisiny
Kalitao tohanan'ny taona niainany tamin'ny famokarana kitapo fantsom-bola
Wowow nanondrana poketra an-dakozia ho any Japana, Alemana, Amerika, sns ... ny orinasa anay dia manam-pahaizana manokana amin'ny famokarana faucet nanomboka tamin'ny taona 2008. Voamarina ny rafitra fitantanana kalitao ISO 9001: 2015.
Ampahany : 23118A4C Sokajy: Fitaovana an-dakozia, Sintomy ny fako an-dakozia Tags: 2 Fehifehy, sisiny, Inôksa